Inyosi nemizuzu yekhethelo noNdlunkulu - Ilanga News
Home Izindaba Inyosi nemizuzu yekhethelo noNdlunkulu
Inyosi nemizuzu yekhethelo noNdlunkulu
“Uyise wandlala isicephu embhedeni, iMbube yahleka, yathi masendlalwe phansi”
INYOSI uBuzetsheni Mdletshe. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
“NGESIKHATHI ngiqala ukubona uMntanenkosi, ngazibonela intombazane encane nje ngomzimba, ngingazi ukuthi izobamba iqhaza elikhulu kangaka ebukhosini baKwaZulu.”
Lawa ngamazwi ashiwo yiNyosi yeSilo, uMnu Buzetsheni Mdle-tshe, ngesikhathi echazela ILANGA ngeNdlovukazi uShiyiwe Mantfo-mbi Zulu uMaDlamini (okwesinca-ne), edlule emhlabeni ngeledlule esibhedlela iMilpark, eGoli.
Uthi iNdlovukazi beyiligagu ngendlela engachazeki, futhi iwa-khathalele amasiko.
UMnu Mdletshe uveze ukuthi wayekhona nangelanga kuyolo-tsholwa iNdlovukazi kwelakubo eSwazini. Uthi isizwe silahlekelwe kakhulu ngoba iNdlovukazi ibisi-qhakambisa kakhulu isintu nje-ngokuqala umkhosi wamaganu. Ubeze amoyizele kancane uMnu Mdletshe uma ekhumbula impilo yeNdlovukazi.
“Ngikhumbula kahle ukuthi mhla ngiqala ukumbona uMnta-nenkosi, iSilo (uZwelithini kaBhe-kuzulu) sasimlethe ekhaya sizo-mkhombisa ubaba ongizalayo.
“Ngesikhathi ngiqala ukumbona, kangizange ngizitshele ukuthi ngumuntu ozokuba namagalelo amakhulu kangaka esizweni ngoba ngangizibonela intombazane nje, encane nangomzimba.
“Ngikhumbula nokuthi mhla eseyolotsholwa, ngangikhona, futhi yimina owabiza wonke ama-khosi sekuphunywa ekuseni ku-bhekwe eSwazini. Nakhona ngathi uma ngifika ngama esangweni, ngenza okufanayo. Kungaleso si-khathi lapho engabona khona uSobhuza ozala uMntanenkosi okokuqala ngqa, ngoba ngesikha-thi ngisho izibongo, waphuma wasilunguza kancane wabe esephindela endlini.
“Ngangiqala ukuyibona iNkosi ngaleso sikhathi ngoba sasijwa-yele ukuyibona ezithombeni ku-phela. Sabe sesingena namabutho futhi saphatheka kahle kakhulu.
“Uma ngingaphosisi sahlala izi-nsukwana impela khona besiphe-the kahle ngoba sasilala eduzane nelawu leSilo,” kusho yena.
“Ngaba nenhlanhla yokuthi ngesikhathi kuyolotsholwa uMnta-nenkosi, ngoba nakhu uDlamini (inyosi) naye kwakukubo eSwazini, ngakho waye-ngeke akwazi ukukhulumela izinkomo zikadadewabo noma aqhube izinkomo zikadadewabo, kwabe sekula-ndwa mina eM-dletsheni ukuba ngizokwenza lokhu.
“Ngikhumbu-la ukuthi iNgonyama yangena nami esibayeni yakho-mba inkabi ebomvu ukuba ngicele ngayo indlela enhle,” esho.
Uthi nangosuku agana ngalo, kwaba bomvu uNongoma wonke amabhayi egcwele izimoto eza-ziqhamuka eSwazini.
“Silahlekelwe kakhulu uMnta-nenkosi, indlela abewakhonze ngayo amasiko, bekusho ukuthi ukhule ngaphansi kweNkosi ebisilandela isintu. Ubekhonze kakhulu ukufaka imvunulo yakwaZulu yize ebeyifaka neyaseSwazini.
“Ube nesandla ekuvuselelweni kwemiye yemikhosi njengowoku-hlolwa kwezintombi. Indaba ya-maganu sasiyazi kwaZulu kodwa yena wafika waqala umkhosi wamaganu,” kusho uMnu Mdletshe.
Eqhuba, uthi uzokhumbula ngobunono bakhe, nokuba yigagu futhi enothando lwabantu.
Uveze ukuthi ngesikhathi iSilo sifika okokuqala nomntanenkosi, ubaba wakhe wendlala isicephu embhedeni, iSilo sahleka, samtshela ukuthi cha, empeleni isicephu kasi-ndlalwa embhedeni ko-dwa makasendlale phansi. Uthi wenza kanjalo uyise wabe esehlala phansi uMnta-nenkosi.
Previous articleIsihluku usomatekisi ebulawa ngentululwane
Next article‘Kahleni maZulu ngeyeSilo esisha, kusaziliwe’ – Shenge